Warqad ka socota Kate Wolford oo ah McKnight ayaa soo saartay Bayaan ku saabsan Kala duwanaanta, Sinnaanta, iyo Ka mid noqoshada
Saaxiibo qaali ah,
Sida aan u ixtiraamo nolosha Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. Waxaan ka fikiray aragtida caddaaladda jinsiyadeed iyo fursado loo siman yahay oo uu doonayay in uu gaaro.
Inkasta oo aanu horumar ka sameynay tobannaan sano, haddana bulshadeenna ayaa wali xukumaya dadka midabka maqaarkooda, iyo sharciyadayada, nidaamyada, iyo caadooyinka dhaqameedku weli wali qof walba noloshooda ma ahee. Tani waa qalad. Waa wax aan la aqbali karin. Waanu qaban karnaa oo waa inaan qabano.
Waxay ku jirtaa ruuxan in aan la wadaago Warbixinta Cusub ee McKnight Foundation ee ku saabsan kala duwanaanta, sinaanta, iyo ka mid noqoshada (DEI), taas oo gudidkeenu si buuxda u ansixiyay.
Qoraalkan DEI waxay dhistaa taariikhda dheer ee deeq-bixiyeyaasha ee beelaha kala duwan si loo kordhiyo fursadaha ay dhammaantood ku niyad-jabaan, waxayna nagu wajahaysaa in aan ku cadaadino aduunka oo dhan oo loo dhan yahay oo loo siman yahay. Waxaan aragnay qiimaha kala duwanaanta, sinnaanta, iyo isdhexgalka sida maareynta muhiimka ah. Iyadoo aan qirsanayn qiimahaas, waxaynu ku guuleysan karnaa hadafyadeenna barnaamijka ama aan saameyn ku yeelan karno inaan rabno.
Marka la eego caddaynta qoto dheer ee joogtada ah ee cunsuriyadda asaasiga ah ee waddankeena iyo qarankeena, waxaan qaadannaa "jinsi iyo hab", kaas oo qiraya jinsiyadda inay tahay arrin joogto ah marka ay timaado su'aalaha sinnaanta. Waxaan sidoo kale aqoonsanahay doorka is-dhexgalka iyo kor u qaadida "jinsiyadeed, dhaqameed, iyo xaaladda dhaqaale-bulshadeed" si ay ugu jiraan bulshooyinka asaasiga ah iyo kuwa soo galootiga ah waxayna ka tarjumayaan meelihii deeq-bixiyeyaasha waaweyn. Waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad akhriso qoraallada la socda wixii macquul ah.
Qoraalkan ayaa dabiici ahaan u keenaya su'aalo ku saabsan wixii isbeddelay McKnight iyo waxa laga yaabo inay isbedelaan. Dhamaantood, odhaahyadu waxay yihiin kaliya isbedelka ah ujeedooyinka la taaban karo, isbeddel siyaasadeed, iyo heerarka xisaabtanka ee raacaya. Waxaan safarkan ku bilawnay marxaladda haddii aan dooneyno in aan aragno isbeddelka adduunka, waa inaan ka bilowno oo aan horumarinnaa dhaqanka sinnaanta leh siyaasadeena ururada, nidaamyada, iyo dhaqanka.
Muddo ka badan 18 bilood, shaqaalaha McKnight waxay ka qayb qaateen taxane tababar ah oo la adeegsanayo Waxyaabaha Horumarinta Dhaqammada Dhaqameedka si loo sii xoojiyo awooddeena si ay si firfircoon uga dhexgalaan khilaafaadka. Marka aan tixgelinno go'aanada mustaqbalka, bayaanku wuxuu na siinayaa North Star.
La shaqeynta Alfonso Wenker Team Dynamics, waxaanu samaynaynaa qorshe hawleedka labada sano ee soo socota. Shaqaaluhu waxay qabteen liiska goobaha mudnaanta leh ee aan jeclaan lahayn in aan hagaajino. Sidoo kale waxaan ogsoonahay in Aasaasuhu si macquul ah uga faa'iidaysto marka aynu eegno dibadda afar darbiyo oo aynu ka helno aragtida bulshada. Dhammaadkii, waxaan kugu martiqaadayaa inaad la wadaagto jawaab-celintaada baaritaan gaaban oo aan qarsoodi ahayn.
Waxaanu ku sii wadi doonaa cusbooneysiinta horumarkeena bilaha soo socda. Hadda, waxaan kuugu soo bandhigeynaa qoraalkeena waxaanan rajeyneynaa inaan maqalno fekerkaaga.
Waad ku mahadsan tahay iskaashigaaga joogtada ah ee aan ka shaqeyneyno sidii loo abuuri lahaa mustaqbal waara oo mustaqbal leh. Sida aynu ku sheegno bayaankeena, waxaynu aragnay shaqadan "masuuliyadeena wadaag ah-iyo fursaddeena la wadaago-maxaa yeelay waxa ka dhexjirta waa wax aan ka yareyn xagayaga la wadaagay."